2019-05-30 21:37:57 ,***အလုပ်ရှာဖွေနေပါသလား? Ruby …
Ruby Job Agency (R.J.A)မှသင့်ကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေပါသည်။
1.မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Car Service ကြီးတစ်ခုအတွက် (1) Manual Account F(3)Posts – လစာ – 150000-180000 – ဆယ်တန်းအောင်၊မအောင်ရသည်။ – အသက် – (၂၀-၂၈)အတွင်း
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၈း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေတိုင်းပိတ်သည်။
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – မလိုပါ။ – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 1.6.2019(စနေနေ့)မနက်(၁၀)နာရီ
2.လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ Car Rental Service ကြီးတစ်ခုအတွက် (1) Driver M(3)Posts – လစာ – 250000-300000 – ဆယ်တန်းအောင်၊လိုင်စင်အညို၊အနီ – အသက် – (၃၀-၄၀)အတွင်း၊ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – (၃)နှစ် – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 1.6.2019(စနေနေ့)မနက်(၁၀း၃၀)နာရီ
3.မ/ဥမြို့နယ်ရှိ အိမ်သုတ်ဆေးမျိုးစုံဖြန့်ဖြူးရောင်းချသောလုပ်ငန်းကြီုးအတွက် (1) လက်ရေးစာရင်းကိုင် M(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဆယ်တန်းအောင်၊စရိတ်ငြိမ်း – အသက် – (၂၀-၂၅)အတွင်း
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၇း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၆း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ဝက်နှင့်လပြည့်နေ့များပိတ်သည်။
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – (၆)လ – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 1.6.2019(စနေနေ့)နေ့လယ်(၁၁)နာရီ
4.ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ Distribution Company ကြီးတစ်ခုအတွက် (1) Driver M(3)Posts – လစာ – 250000-300000 – ဆယ်တန်းအောင်၊English Basic လိုင်စင်အနက် – အသက် – (၂၀-၄၅)အတွင်း
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – (၁)နှစ် – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 4.6.2019(အင်္ဂါနေ့)နေ့လယ်(၁း၃၀)နာရီ
5.မ/ဥမြို့နယ်ရှိ အိမ်သုတ်ဆေးမျိုးစုံဖြန့်ဖြူးရောင်းချသောလုပ်ငန်းကြီုးအတွက် (1) General Worker M(3)Posts – လစာ – 120000-140000 (စားရိတ်ငြိမ်း) – ပညာအရည်းအချင်းမလို၊အတွေ့အကြုံမလို – အသက် – (၁၈-၂၅)အတွင်း
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ဝက်နှင့်လပြည့်နေ့များပိတ်သည်။ – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 1.6.2019(စနေနေ့)နေ့လယ်(၁၁)နာရီ
6.Ruby Job Agency (ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး)ကြီုးအတွက် (1) Customer Service F(10)Posts – လစာ – 180000-250000(ကော်မရှင်) – ဘွဲ့ရ၊Agency အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – အသက် – (၂၀-၃၅)အတွင်း
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – စနေနေ့တစ်ဝက်နှင့်တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 4.6.2019(အင်္ဂါနေ့)နေ့လယ်(၁၁)နာရီ
6.ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Shipping Company ကြီုးအတွက် (1) Senior Marketing F(3)Posts – လစာ – 350000-500000 – ဘွဲ့ရ၊Shipping အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ် English 4Skill – အသက် – (၂၅-၃၅)အတွင်း
– အလုပ်ချိန် – မနက်(၁၀)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – စနေတစ်ဝက်+တနင်္ဂနွေနေ့များပိတ်သည်။ – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 3.6.2019(တနင်္လာနေ့)နေ့လယ်(၂)နာရီ
7.အလုံမြို့နယ်ရှိ Travel & Tour Company ကြီုးအတွက် (1) Sale & marketing M/F(5)Posts – လစာ – 200000-250000 – ဘွဲ့ရ၊English 4Skill Basic/Computer Basic – အသက် – (၂၂-၂၅)အတွင်း
– အလုပ်ပိတ်ရက် – စနေ+တနင်္ဂနွေပိတ် – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 3.6.2019(တနင်္လာနေ့)နေ့လယ်(၂)နာရီ
8. ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ Export & Import Company ကြီုးအတွက် (1) Documentary F(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံမလို Computer Word,Excel.Pagemaker – အသက် – (၂၀-၃၅)အတွင်း
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေ – အင်တာဗျူးအစီအစဉ် – 1.6.2019(စနေနေ့)မနက်(၁၁)နာရီ
9.ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးအတွက် (1) Site Engineer M(3)Posts – လစာ – 350000-500000 – BE(Civil) အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ် – အသက်(၂၅-၃၅)အတွင်း၊နယ်သွားနိူင်သူ
(2) Project Engineer M(3)Posts – လစာ – 600000-800000 – BE(Civil)၊အတွေ့အကြုံ(၅)နှစ်၊နယ်သွားနိူင်သူ – အသက်(၄၀)အောက်၊Auto CAD 2D,3D – အလုပ်ချိန် – မနက်(၈း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်လျှင် (၁)ရက် – 31.5.2019(သောကြာနေ့)နေ့လယ်(၁၁)နာရီအင်တာဗျူးဝင်ရပါမည်။
10.လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Production Company ကြီးအတွက် (1) Cashier F(3)Posts – လစာ – 180000-250000 – ဆယ်တန်းအောင်၊အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – အသက်(၂၀-၂၅)အတွင်း၊ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်လျှင် တနင်္ဂနွေ(၁)ရက် – 31.5.2019(သောကြာနေ့)မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူးဝင်ရပါမည်။
11.မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကြီးအတွက် (1) Office Staff/Reception M(3)Posts – လစာ – 140000-170000 – ဆယ်တန်း၊အတွေ့အကြုံ(၆)လ – အသက်(၂၀-၃၀)အတွင်း၊ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၈း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေ(၁)ရက် – 3.6.2019(တနင်္လာနေ့)နေ့လယ်(၁၂)နာရီအင်တာဗျူးဝင်ရပါမည်။
12. လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးအတွက် (1) Chinese Translator F(3)Posts – လစာ – 400000-600000 – ဆယ်တန်း၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ် – အလုပ်ချိန် – မနက်(၇း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၄း၃၀)နာရီထိ
13.တ/ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Car Service Centre ကြီးအတွက် (1) Helper M(3)Posts – လစာ – 150000-180000(စားရိတ်ငြိမ်း) – ဆယ်တန်းအောင်၊အတွေ့အကြုံ(မလို) – အသက်(၂၀-၂၈)အတွင်း၊ – အလုပ်ချိန် – မနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်ပတ်လျှင် တနင်္ဂနွေ(၁)ရက် – 31.5.2019(သောကြာနေ့)မနက်(၉)နာရီအင်တာဗျူးဝင်ရပါမည်။
– ယုံကြည်မှုနှင့် ထိုက်တန်အောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။အင်တာဗျူးအမြန်ဝင်ရအောင်နှင့် အလုပ်အမှန်တကယ်ရရှိအောင် တိကျ၊မှန်ကန်၊မြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။ ဖော်ပြပါရက်စွဲများအတိုင်း အင်တာဗျူးအမှန်တကယ်ဝင်ရပါမည်။
ရုံးလိပ်စာ – အမှတ်(၁၄၀) ဒုတိယထပ်၊အနော်ရထာလမ်းမပေါ်၊၃၅လမ်းနှင့် ၃၆လမ်းကြား၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။(ပန်းဆိုးတန်းမှတ်တိုင်(သို့မဟုတ်)ဘားလမ်းမှတ်တိုင်ဆင်းပါ)
ဖုန်း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-05-30 by admin.
← 2019-05-30 21:27:34 ,Online Shop Assistant Faceboo… 2019-05-30 21:54:48 ,Vacancy Announcement – Finance… →
2019-08-20 20:34:17 , စာရင်းပညာနဲ့ပတ်​သက်​သမျှ shar…
2019-08-20 15:17:20 ,Zhongyi International Co.,ltd …
2019-08-20 15:15:59 ,Technoland Computer Trading Co…
2019-08-20 15:14:42 ,NCX Myanmar Co.Ltd(HONDA) တွင်…
2019-08-20 15:14:34 ,Admin Please
Copyright @2018 www.myanmarjobnetwork.com. All Rights Reserved.